Tachou : Indimy hisolo akanjo i Bodo
06/09/2018 admintriatra 0
Sady rahavavy no mpiara-miasa. Mifameno eo amin’ny kanto izay ataony i Halisoa Razafindrazana na i Tachou sy Bodo Razafindrazaka. Hatramin’ny nanombohany teo amin’ny sehatry ny mozika dia nampiakanjo hatrany an’i Bodo i Tachou, ary mbola …Tohiny
Sarimihetsika Japoney : Horonantsary telo etsy amin’ny IFM
Firenena iray manana ny maha-izy azy raha ny lafin’ny kolontsaina i Japon. Hotanterahina ny sabotsy 08 septambra izao ny fifantohana amin’ny sarimihetsika Japoney etsy amin’ny « Institut français de Madagascar », na ny IFM Analakely. …Tohiny
Tontolo an-dranomasina : Nankalazaina tany Toliara
Manankarena eo amin’ny ranomasina i Madagasikara amin’ny maha-Nosy azy. Sehatra iray miantoka ny fampandrosoana ara-toe-karena eto Madagasikara ihany koa ny fitaterana an-dranomasina. Nankalazaina nandritra ny telo andro, ny 31 aogositra ka hatramin’ny 02 septambra tany …Tohiny
Filan-kevi-panjakana : Tsy baikon’ny HCC
Nihazakazaka nanery ny HCC hamoaka fanapahan-kevitra ikpna ranjo izay didy havoakan’ny Filan-kevi-panjakana ny praiminisitra Ntsay Christian, rehefa nanadino namoaka didim-panjakana miantso ny mpifidy araka ny voalazan’ny lalam-pifidianana. Namoaka ny heviny mikasika ny fitoriana napetraky ny …Tohiny
Ankoatra ny fanelezana tsaho sy fanakorontanana saim-bahoaka nataon’ny biraon’ny SMM dia miharihary ihany koa izao fa tena manitsakitsaka ny hasin’ny Dokotera mihitsy izy ireo. Inona moa no antony ilazana fa nanely tsaho sy nanakorontana saim-bahoaka ...Tohiny